07/06/13 ~ MOBILE IT NEW
Windows7administrator password hacking (၀င်းဒိုးကိုယ်တိုင်တင်တတ်သူများသာ)
11:29 PM computer Software No comments
တစ်ခါတစ်လေကိုယ်ပေးထားတဲ့ password ကိုကိုယ်ကိုတိုင်ကိုမေ့သွားတတ်ပါတယ် ။ အဲ့လိုမေ့သွားခဲ့ရင် အဆင်ပြေအောင် password ပြောင်းတဲ့နည်းလေးပါ ။ သူများကို ကွိုင် မရှာဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော် ။ သိပြီးသားဖြစ်နေရင် ကျွန်တော်ညံ့လို့ ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ....
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ windows7ခွေတစ်ချပ်ထဲပါ ။ (ဘာဆော့ဝဲလ်မှမလို)
၁ . windows7ခွေထည့် restart ချ စက်ပြန်တက်လာရင် BIOS ထဲမှာ CD ခွေကို first boot device မှာထား.....
၂ . CD ခွေကနေ boot တက် install လုပ်မယ် ဆိုတဲ့အဆင့်မှာ install မလုပ်ပဲ repair my computer ရွေး
၃ . CMD command prompt ကိုရွေး
၄ . sethc.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို copy ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်...(command prompt ထဲမှာရေးရမှာပါ)
(C:drive အောက်က windows folder အောက်က system32 folder အောက်က sethc.exe ဆိုတဲ့ file ကို C:drive ထဲ copy ကူးယူတာပါ) copy ကူးတာအောင်မြင်ရင် copy ကူးပြီးကြောင်းစာတမ်းလေးပြပါလိမ့်မယ် 1 file is copied (ခြုံကြည့်ရင် c:drive ကြီးထဲမှာ sethc.exe file နှစ် file ဖြစ်သွားမှာပါ)
11:27 PM computer error No comments
Blue Screen Error ဆိုတာကတော့ Computer အသုံးပြုသူများ ကြုံတွေ့ရမယ့် ပြဿနာတစ်ခုဆိုရင်လဲ မမှားနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး Monit...orပေါ်မှာ Blue Screen Page ပေါ်လာပြီဆိုရင် များသောအားဖြင့် Userတွေက Windows ပြန်တင်ဖို့ပဲ စဉ်းစားကြပါတယ်။ Windowsကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Error မျိုးဆိုရင်တော့ Windows ပြန်တင်လိုက်လို့ ကောင်းသွားနိုင်ပေမယ့် တခြား Hardwareပိုင်း Error တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Windows ပြန်တင်လိုက်ရင်လဲ အလကားပါပဲ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ Blue Screen Error ဖြစ်နိုင်သလဲ၊ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ စသည်ဖြင့် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ အရင်ဆုံး Bluescreen Errorက ဘယ်လိုကြောင့် ဖြစ်ရသလဲဆိုတာကို ပြောရရင် Computerရဲ့ Windows Operating Systemကနေ ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Fatal Error Codeကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Error Codeက
Player ပေါင်း ၅၀ ပါဝင်တဲ့ 50 Collections of Various Media Player For Android
11:20 PM Android Application No comments
မိတ်ဆွေများရဲ့ Android Device မှာသုံးတဲ့ Player အမျိုးအစားပေါင်း 50 ပါဝင်တဲ့ Player Collection ကိုတွေ့လာလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.. ဘာတွေပါလဲ ကြည့်ရအောင်-
Apollo+ v1.1Astro Player (Unlocked) v1.158
GoneMAD Music Player FULL v1.4.6
EZ Folder Player v1.1.16
11:19 PM computer Software No comments
Sony Xperia Z / ZR Root လုပ်နည်း
7:57 AM sony Root လုပ်နည်းများ 1 comment
Sony Xperia Z / ZR Root လုပ်နည်း ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ZR ကိုတော့ ကျွှန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီသာပါ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်
Root လုပ်ဖို့အတွက် Computer မှာ ADB Driver သွင်းထားရပါမယ်။
Computer မှာ ADB Driver မသွင်းရသေးရင် အရင်သွင်းထားလိုက်ပါ။
1:05 AM computer Software No comments
ကွန်ပျူတာ အခြေခံ နည်းပညာစာအုပ်များ
12:57 AM နည်းပညာစာအုပ်များ No comments
View Download ဦးအောင်လင်း
View Download မျိုးသူရ
View Download မောင်မောင်မြင့်သိန်း
View Download ကွန်ပျူတာဂျာနယ်စာတည်းအဖွဲ့
View Download လွမ်းဧကရီ
ကွန်ပျူတာ သုံးနေသောသူများအတွက် RUN Commands များ
12:23 AM computer Software No comments
Run Command တွေကို ကွန်ပျူတာသုံးသူ တော်တော်များများ ရင်းနှီး ပါတယ်... ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကို ချက်ချင်းရောက်အောင် သွားနိုင်တဲ့ အတွက် အသုံးလည်းများပါတယ်...
Run Command ကိုအသုံးပြုချင်ရင် Start + Run ကနေသွားလို့ရသလို... Window + R ကို တစ်ပြိုင်ထဲနှိပ်ပြီးလည်း ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... အခု Run Command တွေအများကြီး ရှိတဲ့ထဲက နည်းနည်းအသုံးဝင်မယ် ထင်တာတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်...
PC အချင်းချင်း ဖုန်း free call ခေါ်ကြမယ်
12:13 AM computer Software No comments
အခုပေးမယ့် Software လေးကတော့ PC တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး Free ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်းကိုလဲ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ6ဦး အထိ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ window အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Player ပေါင်း ၅၀ ပါဝင်တဲ့ 50 Collections of Variou...